Mpanamboatra Cook Ware - Mpamatsy sy Factory Factory Ware Cook
kofehy vy nopetahana takela-by
kofehy vy nopetahana takelaka BCS31: 26.5 * 5.7CM Fitaovana: vy vy Model: BCC11-1Size: 22 * ​​11.3cm 26.2 * 12.4cm Coating: loko miloko na preseasonedBV, CE, SGS, FDA, LFGB nozahana, Izahay dia manamboatra, manome toky ny fotoam-pifaliana sy kalitao.
vy vy volomparasy nandrendrika vilany BCS14: 27 * 8CM Fitaovana: vy vy Model: BCC11-1Size: 22 * ​​11.3cm 26.2 * 12.4cm Coating: loko enameled na preseasonedBV, CE, SGS, FDA, LFGB nozahana, Izahay dia manamboatra, manome toky delievry fotoana sy kalitao.
vy vy natsipy takela-bato
vy vy griddles enameled BCRG03: 32 * 3CM Fitaovana: vy vy Model: BCC11-1Size: 22 * ​​11.3cm 26.2 * 12.4cm Coating: loko enameled na preseasonedBV, CE, SGS, FDA, LFGB notsapaina, Izahay dia manamboatra, manome toky delievry fotoana ary kalitao.
vy vy nandrakotra trivets BCT03: 23 * 21CM Fitaovana: vy vy Model: BCC11-1Size: 22 * ​​11.3cm 26.2 * 12.4cm Coating: loko enameled na preseasonedBV, CE, SGS, FDA, LFGB notsapaina, Izahay dia manamboatra, manome toky delievry fotoana ary kalitao.
vilany vy enamel
poti-verinia vy BCS30: 21.2 * 8.5CM Fitaovana: vy vy Model: BCC11-1Size: 22 * ​​11.3cm 26.2 * 12.4cm Coating: loko enameled na preseasonedBV, CE, SGS, FDA, LFGB notsapaina, Izahay dia manamboatra, manome toky delievry fotoana sy kalitao.
manendasa vy preseasoned fanendasana vilany miaraka amina sisiny
vy atsimo presyasoned fry pans BCS13: 25.5 * 5.5CM Fitaovana: vy vy Model: BCC11-1Size: 22 * ​​11.3cm 26.2 * 12.4cm Coating: loko enameled na preseasonedBV, CE, SGS, FDA, LFGB nozahana, Izahay dia manamboatra, manome toky delievry fotoana sy kalitao.